क्याम्देन टाउन, लन्डनको वैकल्पिक छिमेक | यात्रा समाचार
मरियम | | के हेर्ने
सबैभन्दा वैकल्पिक लन्डन जान्नको लागि जानु भन्दा उत्तम केही छैन क्याम्डेन टाउन, यसको छेउछाउको सडक बजारको लागि प्रसिद्ध छ, साथै बेलायतको वैकल्पिक चट्टान राजधानी पनि मानिन्छ। प्रत्येक हप्ता यसले पर्यटक र लन्डनबाट हजारौं भ्रमण प्राप्त गर्दछ कि भुमिगत वातावरणले यसको विशेषता दिन्छ र जुन युवा डिजाइनरहरू र संगीतकारहरू भेला हुन्छन्।
1 केम्देन टाउन कस्तो छ?
2 केमडेनमा हामी के भेट्टाउन सक्छौं?
3 जहाँ केडेन टाउनमा खाने?
4 केम्देन टाउनमा कसरी पुग्ने?
5 केम्देन टाउन स्टोरहरू कहिले खुला हुन्छन्?
केम्देन टाउन कस्तो छ?
केम्देन टाउन १ 90 s ० को दशकदेखि आवासीय क्षेत्र भएको छ तर आज यो पर्यटकहरूको लागि आकर्षणको केन्द्र भएको छ। यसैले फुर्सत, संस्कृति र सबै स्वाद र जेबहरूको लागि ग्यास्ट्रोनोमीको विस्तृत श्रृंखला।
लन्डनको यस छिमेकमा तपाई धेरै विविध व्यक्तिहरूसँग मिसिन सक्नुहुन्छ क्षेत्रको ठूलो संख्यामा गोथिक, गुंडा, हिप्पी वा भिन्टेज पसलहरूको कारण। क्याम्देन टाउनमा त्यहाँ सबै स्वादहरूको लागि पसलहरू छन् र उनीहरूको अनौठो, आइकॉनिक र कलात्मक फेकडेस भनेको उनीहरूको बारेमा खास कुरा हो।
केम्देन टाउन भ्रमण गर्न उत्तम दिन आइतवार हो र यो बिहान सबेरै बुक गर्न सुझाव दिइन्छ किनकि यो एकदम ठूलो क्षेत्र हो र यो अरुहरू भन्दा फरक छ कि यसले कोही पनि उदासीन छोड्दैन।
केमडेनमा हामी के भेट्टाउन सक्छौं?
क्याम्देन बजार आफै पनि एउटा पर्यटक आकर्षण हो जुन १ 70 s० मा क्याम्डेन लक शिल्प बजारको स्थापनासँग शुरू भयो। र, केम्डेन मार्केटमा हामी विभिन्न बजारहरू भेट्टाउन सक्दछौं जहाँ व्यावहारिक रूपमा सबै कुरा छ।
Inverness Street: परम्परागत बजार।
इलेक्ट्रिक बलरूम: इनडोर बजार केवल सप्ताहन्तमा खोल्दछ।
क्याम्डेन लक: मूल, भवन भित्र धेरैजसो हुन्छ।
अस्तबल बजार: सबै भन्दा ठूलो र एक भूलभुलैया को आकार छ। जहाँ पहिले अस्तबलहरू थिए, आज त्यहाँ पसलहरू छन् जुन प्राय: फर्नीचर र कपडा बेच्छन्। प्रवेशद्वार घोडा द्वारा सुरक्षित छ।
क्याम्डेन नहर बजार: सडक बजार जुन विशेष गरी कपडा बेच्छ।
बक स्ट्रीट मार्केट: अघिल्लो जस्तो।
साइबरडग: एकदम जिज्ञासु पसल जहाँ साइबर लुगा ठूलो आवाज टेक्नो संगीत, गो गो र डीजेको बीचमा बिक्री हुन्छ।
जहाँ केडेन टाउनमा खाने?
छवि | स्वादिलो ​​यात्री
पसलहरूको पूरै बिहान तपाईंको भोक जगाउँछ र क्याम्डेन मार्केटमा सडकमा थुप्रै खाद्य स्टोलहरू छन् जहाँ तपाईं विश्राम लिन सक्नुहुन्छ र खुला हावामा विश्वका विभिन्न भागहरूबाट व्यंजनहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मोबाइल स्टोरहरू र स्थिर स्टोलहरू छन् जुन उनीहरूको उत्पादनहरू बेच्ने मूल्यहरूको लागि बेच्दछन् ताकि हामी सँधै केही चीजको लागि प्रयास गर्न सक्नेछौं धेरै पैसाको लागि होइन।
आर्केड स्टोलहरूले ट्रेलाई केवल full or वा for को लागि खानाले पूर्ण प्रस्ताव गर्दछ, र दिन बढ्दै जाँदा मूल्य एक पाउन्डले खस्न सक्छ। जहाँसम्म, क्याम्देन टाउनका सडक विक्रेताहरू जस्तो खाना पनी उत्तम गुणवत्ताको हुँदैन। यस अर्थमा, वालेट अलि बढी निचोर्नु राम्रो हुन्छ यदि तपाइँ आफ्नो मुखमा केहि बढी विस्तृत राख्न चाहानुहुन्छ, यदि यो अधिक महँगो भए पनि।
यद्यपि, क्याम्देन टाउन एक छिमेक हो जहाँ विकल्पहरू प्रशस्त छन् त्यसैले क्याफेहरू, बारहरू, रेस्टुरेन्टहरू भेट्टाउन गाह्रो छैन जहाँ समकालीन र रचनात्मक वातावरण दुबै यसको मेनू र सजावटमा व्याप्त छ।
केम्देन टाउनमा कसरी पुग्ने?
छवि | शटरस्टक
क्याम्देन टाउन एक छिमेकी हो जुन मध्य लन्डनमा राम्रोसँग जडित छ, मात्र २० मिनेट टाढाबाट। तपाईं मेट्रो, बस वा वाटरबसबाट जान सक्नुहुन्छ।
बस: लाइनहरु २ 24, २,, ,१, १27, क्याडेन टाउन स्टप (स्टप एक्स); लाइनहरु, 31, १168, २१88, क्याम्डेन टाउन केन्टिस टाउन रोड स्टप (स्टप एल); लाइन २134 स्टप क्याम्देन हाई स्ट्रीट केम्डेन टाउन (स्टप सीएक्स); २ 214, २ 274,, 24, १29 क्याम्डेन टाउन स्टप (स्टप एस)।
ट्यूब: उत्तरी रेखा क्याम्डेन टाउन स्टपमा लैजानुहोस्।
वाटरबस - सानो भेनिसबाट रीजेन्टको नहर मार्फत क्याम्डेन लक।
केम्देन टाउन स्टोरहरू कहिले खुला हुन्छन्?
क्याम्देन टाउनका प्रमुख बजारहरू १०: ००-१०: to० देखि १:: ००-१-10: ०० सम्म खुल्ला छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » यात्रा » के हेर्ने » क्याडेन टाउन, लन्डनको वैकल्पिक छिमेक